Gudoomiyaha Barlamaanka Puntland oo Garowe kula Shiray madax ka socotay Hay’adda UNDP – Radio Daljir
Agoosto 13, 2015 7:38 b 0
Khamiis, Ogoosto 13, 2015 (Daljir) — Gudoomiyaha barlamaanka dowladda Puntland oo ay weheliyeen gudoomiye kuxigeenka iyo xoghayaha guud ee barlamaanka ayaa maanta kulan laqaatay xubno kasocday saraakiisha ugu saraysa Hay’ada UNDP iyo xubno kasocda jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Yemen.
Kulankaan ayaa waxaa looga hadlayey mashaariicda horumarineed ee Hay’ada UNDP ka wado xarunta barlamaanka Puntland, gaar ahaan mashaariic socotey labadii bilood ee ugu dambaysay. Gudoomiyaha barlamaanka Mudane Siciid Xasan Shire oo lahadlay warbaahinta kadib kulanka ayaa sheegay in wadahadalku kusoo dhammaaday waji wanaagsan ayna mashaariicdaani socon doonaan inta sanadkaan kahadhay.
Dhanka kalena gudoomiya ayaa kulan laqaatay madax kasocotey jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Yemen, kuwaasi oo dhowaan soo gaarey magaalada Boosaaso oo lagu soodhoweeyey kumanaan qoys oo kasoo cararay colaada wadankaasi.
Mudane Siciid Xasan Shire wuxuu sheegay in Kulankaan ay xubnaha jaaliyaddu dowladda Puntland uga mahadcliyeen sida ay usoo dhoweysey dadka kasoo cararay dagaalada wadanka Yemen.
Qarax ka dhacay Deked ku taala Shiinaha oo Dilay 50 Qof